Mpanaparitaka kaontenera elektrika, masinina mpikarakara fako, Harper Hopper - GBM
Container Rotary loader & fitaovana mampidina entana
Mpanaparitaka semi-mandeha ho azy
Mpanaparitaka teleskopika elektro-hydraulic
Grab elektrika-hydraulic Hydro
Fametahana herinaratra elektrika-Hydraulika
Grab Control Remote Wireless
Maka ny diesel
Andian-dahatsoratra Cargo Hopper marobe
Hopper karazana mihetsika
Hopper karazana vovoka
Cranezy booman'ny Knuckle boom
Teleskopika Boom Marine Deck Crane
Vano marin-dranomasina mahery vaika
Crane efa niasa
Mpitantana fitaovana manodina hydraulic
Mpanamboatra fitaovana hydraulic karazana
Mpitantana akora hydraulic type ban
Izahay dia GBM. Izahay dia mamolavola, manamboatra sy serivisy serivisy serivisy ary fitaovana fampiakarana manokana ho an'ny famoahana sy famoahana. Izahay dia manome ny fonosana rehetra araka ny takinao.
Ny fakana ny paiso volomboasary elektrônika GBM dia ampiasaina amin'ny fakana kargôma be mpampiasa (toy ny vy kisoa sy vy vy mavesatra). Nampiasaina be tany amin'ny seranana sy ny vy fanodinana vy ary ny fotoana hafa izy ireo.
Ny hopper namboarin'ny orinasanay dia ampiasaina amin'ny famoahana sy famoahana ny arina arintany, vovoka simenitra ary vovoka vy, ary azo foronina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny crane deck sy ny power swivel spreader dia novolavolain'ireo injenierantsika, mila minitra vitsivitsy monja mba hianarana ny fomba fampiasana ilay rafitra. Misy boaty fanaraha-maso misaraka miaraka amina fanaraha-maso roa: ny iray amin'ny fihodinana havia ary ny iray amin'ny fihodinana havanana. Miaraka amin'ny fanaraha-maso fifaliana, ny toeran'ny entana dia mety ho fametrahana mora foana.
Ny safidinao dia misy akony lehibe amin'ny famokarana ny seranan-tsambo. Izany no antony ananantsika ny fitsipika volamena: aza mampandefitra ny teknolojia manara-penitra sy manatsara endrika miavaka.
Rafitra fanamafisam-bato ho an'ny mpandika vato
Crane baomba raikitra
Raikitra fanaraha-maso tsy misy tariby
Mpanamboatra fitaovana hydraulic karazana banira1
Mpanaparitaka teleskaopy elektrika
Fisintonana clamshell elektro-hydraulic
GBM no mpamokatra lohan'ny milina famoahana sy famoahana entana, miavaka amin'ny milina seranan-tsambo, milina metallurgical, toy ny: Grabs, Hopper, Container spreader, Clamps, Deck crane sns, Manufacturer of Marine Offshore Crane, Shore Crane, Mobile Harbour Crane, Shane Crane , Overhead Crane, sns. Ankoatry ny vokatra mahazatra, GBM dia mamorona vahaolana tsy manam-paharoa amin'ny toe-javatra manokana sy ny filan'ny mpanjifa amin'ny fikirakirana ara-pitaovana. DESIGN ADVANTAGE 1. Volavola matevina 2. dian-tongotra kely 3. Fandraisana mora foana amin'ny fikojakojana, ny serivisy ary ny fanamboarana
Misy teny iray izay misambotra ny fizotranay, manomboka amin'ny malemy ka hatrany amin'ny komisiona: an'ny tena manokana. Ny dingana voalohany dia ny famakafakana tsara ny filanao sy ny fanirianao ary avy eo hiezaka mafy izahay hanome vahaolana ho anao.
Ho fanampin'ny vokatra avo lenta, GBM dia manome servisy manerantany maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny 24 volana & injeniera azo atolotra any ampitan-dranomasina. Midika izany fa avelanay ianao hiasa am-pilaminana sy amin'ny fomba mahomby - na dia amin'ny fepetra faran'izay mafy aza.
Fitaovana rotary lozisialy sy fitaovana fampidinana
Vano-dranomasina mahery vaika teleskopika
Crane fifandanjana hydraulic / finday miaraka amin'ny grab / ...
Excavator manohana siny fihazonana hydraulic
Fisamborana tsy misy porofo
Herisetra amin'ny hoditry ny volomboasary (hidina)
Telefaona: 0086 18221720746
Adiresy: SHANGHAI GUANBO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
© Zon'ny mpamorona - 2018-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina - Sitemap
crane deck, Crane mandanjalanja, vano hydraulic, baomba manjono, crane baomba teleskopika knuckle, vano an-dranomasina, Vokatra rehetra